Zithini Imibala Ngegama Lakho Lophawu | Martech Zone
Zithini Imibala Ngegama Lakho
NgoLwesihlanu, ngoJuni 29, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Umbala uhlala usisihloko esinomdla kwaye zezinye zezona zinto zidume kakhulu ekwabelwana ngazo kwibhlog. Ukukhethwa kombala ngokwesini, logo imibala yewebhu, nokuba ingaba okanye hayi imibala ifuthe kwintengiso zonke ziye zaba yimifanekiso esiziqhubileyo. Le infographic evela kwiMarketo kunye neKholamu yesiHlanu ibonelela ngendlela eyahlukileyo… ithini imibala ngophawu lwakho.
UMarketo: Olona hlobo lubalaseleyo kwihlabathi luchazwe ngemibala yazo. Cinga ngeengqameko zegolide zikaMcDonald, igama elithi Jet Blue, kunye nesiqubulo seUPS, Yintoni anokuyenza uBrown? Ezi nkampani, kunye nezinye ezininzi, ngobuchule zisebenzisa imibala kwi logo yazo, iwebhusayithi, kunye nemveliso ukubhenela abathengi.
tags: imibala yophawuimibala yophawuumbalaimibalaUmbalaimibalalogo yombalalogo imibala
I-Balihoo: Ukuzenzekelayo kwentengiso yasekhaya
Iifowuni zeSmart kunye neeKhuphoni zisebenza
Juni 30, 2012 ngo-2: 16 PM
Enkosi ngokwabelana nge-infographic yethu! Ndixatyiswa kakhulu.
Jan 28, 2013 ngo-3: 03 PM
I-infographic enkulu, uDoug… 2 oobhontsi phezulu!